Linux ndiyo inoshungurudzwa "operating system". Chokwadi? | Linux Vakapindwa muropa
Linux ndiyo inoshungurudzwa "operating system", asi hapana kana chinokodzera?
Mumaawa ekupedzisira, rumwe ruzivo rwekuchengetedza rwakaburitswa na www.mumburum.com: Linux ndiyo "sisitimu inoshanda", mumakotesheni nekuti ihunzwa, ndiyo yakanyanya kushupika pasi rose. Ichi ichokwadi here? Zvinorevei? Pane chekujekesa here? Pamwe hongu uye, uchiverenga iyo ruzivo, pane chimwe chinhu chinokwezva kutarisisa kwakawanda: iyo nguva yavakashandisa kuongorora mashandiro uye nevamwe, senge Microsoft yeWindows. Ngatitangei kutanga ne data.
Ongororo yakaitwa neNational Institute of Standards uye Technology yeNational Vulnerability Database yakatevera hurema huripo mukushanda masisitimu kubva 1999 kusvika 2019. Zvakaipisisa pane zvese, iyo yakave yakanyanya kunetsekana panguva ino, anga ari Debian, ine huwandu hwe3067 kusagadzikana. Kumashure, Android yakave ne2563, ichivhara podium iyo Linux kernel ine huwandu hwe2357 hurema. Iyo yepamusoro 5 yaizovharwa neMacOS (yaimbove Mac OS X) ine 2212 uye Ubuntu ine 2007 kushushikana.
1 Linux ine zvakawanda zvinokundikana, asi mune imwe nguva
2 Windows 10 uye Debian, ingangoita yakafanana nhamba yekusagadzikana mu2019
Linux ine zvakawanda zvinokundikana, asi mune imwe nguva
Vazhinji venyu pamwe munoshamisika «Ko Windows? Akanga asingafanirwi kuve ari panjodzi here? Uye apa ndipo pandinofunga kuti kusaruramisira kuri: Windows 7 yaive nematambudziko 1283 uye Windows 10 1111, iyo inowedzera kusvika 2394. Kungotarisa zvakapusa kuchazotiudza kuti 2394 ari pasi peDebian's 3067 (kupfuura Ubuntu's 2007), asi kubva Microsoft yakangotora maviri masisitimu anoshanda aburitswa mumakore gumi apfuura, uye kwete mumakore makumi maviri sezvavakaita naDebian. Ivo pamwe vakaita zvimwe chete ne macOS, saka zvinoita sekunge kudzidza hakusi iko kwese kwaungatarisira.
Kune rimwe divi, isu zvakare tinofanirwa kuyeuka kuti zvimwe hazviwanzo zvakanyanya kuipa. Mazhinji ekushomeka kunowanikwa muLinux zvidiki zvipuka uye zvakagadziriswa mumaawa, nepo mazhinji eaya anowanikwa muWindows akanyanya uye achienda kwenguva refu asina kugadziriswa. Chero zvazvingaitika, chinhu chimwe chiri pachena: vangoongorora maMicrosoft system maviri chete (Ivo havataure nezveWindows 8.x) uye zvakadaro vawana kusagadzikana zvakanyanya pane masisitimu akaita seUbuntu.
Windows 10 uye Debian, ingangoita yakafanana nhamba yekusagadzikana mu2019
Chimwe chokwadi chinoshamisira ndechekuti, kuongorora chete 2019, Android ingadai yakanyanya kutambura (414), ichiteverwa na Debian (360) uye Windows 10 (357), zvinoreva kuti hongu, izvo Debian iguru, asi izvo zvishoma zvishoma pasi peiyo Microsoft system kunyangwe uchifunga kuti Windows yanga iri iyo Rolling Release kwenguva yakareba uye Debian inoburitsa masystem matsva ekushanda gore rega. Kuti upedze nhau, Firefox neChrome zvinowonekawo pane zvinyorwa, ne1873 uye 1858 kusagadzikana zvichiteerana. Ivo havana kutaura nguva chaiyo, asi pamwe vakaongorora mabhurawuza kubvira yavo yekutanga vhezheni.
Chero zvazvingava, zvakagara zvichitaurwa izvozvo hapana yakakwana yekushandisa sisitimu kana software, saka zvakakodzera kuti zvinhu zvese zvigadziriswe nguva dzese ... kunyangwe tikashandisa iyo "yakachengeteka" Windows iyo inongoudzwa hafu chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux ndiyo inoshungurudzwa "operating system", asi hapana kana chinokodzera?
"Kunyangwe tikashandisa maWindows" akachengeteka "ayo avanongotiudza hafu."
Ehe, chinhu chimwe chete ichi chinoitika muLinux, chete izvo zvakakosha zvinoverengerwa. Kana chinhu chenhau chikaonekwa pawebhu peji nezve njodzi, kunyangwe kana komendi inoonekwa. Inofanira kunge yakangoerekana yaitika.
Zvidziviriro zvekuchengetedza izvo zvakaiswa nguva nenguva zvinofanirwa kunge zviri ngano.
Mhoro Pepe. Ndiri kuziva izvi, asi mune ino dzidzo chaiyo vakaverenga hafu yenguva. Ndosaka ndichizvitaura, nekuti hazvina kunaka kuti Debian anotora kubva 1999 uye Windows chete kubva ku7 (2009). Ihafu yenguva. Zvakare, ivo havataure Win 8 futi.
Ivo vaifanira kunge vakafananidza debian kwemakore makumi maviri nemahwindo kubva muna 20 vhezheni kuti ive inoshanda ndinofunga
Chii CHAKAIPA JOKI
Ini handizive mushandisi weMS WOS ane komputa yake ASINA kutapukirwa nehutachiona
Ini handizive LiGNUx mushandisi ane komputa yake yakatapukirwa nehutachiona.
Chinhu chimwe matambudziko POTENTIAL akaonekwa nenguva, uye akagadziriswa nenguva nguva dzose mune LiGNUx, uye kazhinji nguva dzose muMS WOS - iyo yatinoyeuka Google yakaisa mumatambudziko mazhinji nemutemo wayo wekutsikisa iwo asina kugadziriswa munguva - , uye zvakati siyanei, CHOKWADI CHOKWADI CHIITI.
Ndeipi kambani yemarudzi akawanda inovimba NAYO KUCHENGETEKA muMS OS?: Hapana
Nei ese macomputer ekuchengetedza maturusi LiGNUx?
MUChengetedzo pane OS imwe chete iyo avo vanoziva kuvimba uye iri LiGNUx, iyo yese iri PROPAGANDA.
... Ini ndinofunga: iyi nyaya ndeimwezve yekugadzira zvido pakati peimwe kana imwe OS.
Kana tichizofananidza, ngatienzanisei vhezheni dzazvino dzeOS iri kukurukurwa; nekuti zvinofungidzirwa kuti shanduro dzapfuura hadziverenge nekuti dzazvino dzino dzitsiva nekubvisa kusagadzikana kwavo.
Ini ndinoenderera: imwe kana imwe OS haisi nani, asi imwe ndiyo yakanakisa sekusarudzwa nemushandisi wekupedzisira, usatenda.
… Matambudziko aripo munyika angadai asina kuwanda, dai vanhu vasina kubhadhara mubereko wakakura kudaro kumisiyano uye kana zvikabatsira mukugadzirisa kwavo.
Kwete, GNU / Linux haisi iyo yakachengeteka OS yezvose, pane zvimwe zvirinani uye zvakachengeteka zvakanyanya seFreeBSD, NetBSD uye OpenBSD.
PS: Mukuchengeteka, iyo yakachengeteka sisitimu yekushandisa pasirese (sekumisikidzwa ne default) ndeye OpenBSD.
Ini ndinofungidzira kuti zvese zvinoratidzwa ndezve zvakagadziriswa zvikanganiso, ndiko kuti, zvimwe zvikanganiso zvakawanikwa nekugadziriswa mu linux kupfuura mumawindows. Izvi zvine musoro nekuti semuenzaniso pane kuyedzwa kwakasimba mudhiian, izvi zvinogona kukonzera matambudziko anogarwa nhaka kubva kushanduro dzekare dzakagadziriswawo (shanduro dzeLTS). Zvakare zvakadii nezve izvo zvisingawanikwe (kana zvisina kumbogadziriswa). ? Kana ini ndikavaka Inoshanda Sisitimu uye ndikasambozvigadzirisa, pamushumo uyu inogona kunge iine mashoma zvikanganiso uye nekudaro isinganetseke?
Pamashoko ese andakaverenga, ako ndeechokwadi.
MuGNU / Linux kune zvakawanda zvikanganiso, nekuti kune vanhu vazhinji vanoona nekugadzirisa iwo mhosho; ndichiri mu OS yakavharwa seWindows zvikanganiso "zvakavanzwa pasi pesimbi" uye idzo dzavanoburitsa dzakakomba zvakanyanya uye vatozivikanwa ne "hafu yenyika" panguva yekuzvibvuma ... chero chavanotaura, ini ndichiripo naDebian KDE.
Ini handina basa, mahwindo anondinetsa kunze uye anogara achiputsa uye achinonoka kupfuura bhiza remurume akaipa, aine hafu-tani mafuta akaipa murume pamusoro ... ini handichinje linux kana kudhakwa.
Kutanga nekuti munyori akamonyoroka paakataura kuti Linux iri "sisitimu inoshanda."
Ose ari maviri (Win uye GNU / Linux) apedza nguva neshanduro kuti vasvike pavari. Asi nepo iyo Debian timeline ichitaura system mune inogara ichivandudzwa uye kugadzirisa kubva ku7 yandakatanga nayo kune gumi andiri kushandisa parizvino, Windows inongosiya nzira ye shit munzira.
Pakupera kwezuva Win 10 ndiko chete kudzoka kuWin 7, uye ivo vaedza nayo kugadzirisa ese ma shits anoitwa na8 na 8.1. Kusanganisira iyo yeiyo gumi anga achingova musoro wevashandisi uye weMicrosoft.
Rimwe dambudziko risina Debian asi kana richitambudza Windows 10 kupatsanurwa. Ikozvino pane angangoita manomwe mavhezheni eWin 7 uye pamwe ndicho chikonzero chinokonzeresa matambudziko anowanikwa nevashandisi veWin 10 kana uchigadzirisa.
Iwo makotesheni ndee izvo chete, zvekuti zvinonzwisiswa kuti haisi iyo inoshanda system. Ini ndaifunga kuti ndanga ndajekesa, kunyanya kana iyo tsanga ichitaurwawo muchinyorwa. Ini ndinofunga vazhinji venyu munofanira kunzwisisa kuti inotaurwa kune vazhinji, kune veruzhinji, ndosaka vezvenhau vese vachiwanzotaura nezveLinux sisitimu yekushandisa, chimwe chinhu chisina kuzadzikiswa muchinyorwa chino kana uchishandisa makotesheni. Isu tinoziva kuti izvi hazvisizvo, asi nekuzvitaura nenzira iyi tinodzivirira kusagadzikana.
Zvakakomba? yeiyo GNU / Linux inoshamisa
Pane matambudziko maviri: Iyo chikamu chekushandisa kweLinux uye, vashandisi vepamba vakagara mahara, kungave neWin kana Linux. Iko hakuna bhizinesi.
Louis f. akadaro
Ini ndinofunga zviri pachena kuti chidyiro chei avo vakaita chidzidzo ichi vanodya. Ndinoonga zvinyorwa zvako, kunyangwe mune dzimwe nguva kubva pakuona kwemushandisi weavice ndinozviona zvakanyanyisa. Ndatenda
Pindura Luis F.
uye kunyunyuta pamusoro paDebian….
Chidzidzo hachina kuvimbika chaizvo nekuti misiyano inoshandiswa mukusimudzira kwayo inozviisa pasi chose. Hatizive mhando yekushushikana, kana ichikosha, pamwero upi iyo inogona kushandiswa, kana yakagadziriswa mune dzimwe shanduro dzapfuura, nezvimwe. Debian inotorwa sehurongwa umo mave musina mavhezheni apo mumawindows akasiyana mavhezheni anotorwa achiregeredza vamwe uye achiregeredza kuti hurema hwakawanda hwemahwindo hunotorwa se zero zivo, ndiko kuti, zvinongoburitswa chete kana zvabatanidzwa. hatizive iyo chaiyo nhamba yekusagadzikana uye yavo yazvino mamiriro MaWindows windows arikushaya mukudzidza pamwe nenguva yakatarwa yekuverenga kwavo haina kuverenga nenzira yekuenzanisa. Ichi chidzidzo chinonzwika zvakanyanya sekushambadzira kwenhema kwandiri sezvo ichiedza kuvanza kuti nezuro yaive Chipiri Chipiri mune yekuvandudza kweMicrosoft. 115 inogadziridza uye mazhinji acho akakomba zvakanyanya.
Zvisinei, uye kunyangwe isu tatojaira kumanyepo aya, hazvikurudzirwe kuwira mumusungo wekunzwa wakachengeteka kana uchishandisa GNU / Linux. Hapana system iri 100 muzana yakachengeteka.
Windows Vista inovarova vese pamwechete.
Julius fernandez akadaro
"Nyanzvi" dzinotsigirwa neMicrosoft Windows, kurumbidza chigadzirwa; kuibvumira kuti igare yakadzika mune mazhinji maPC matsva epasirese.
Uye kusaperera kwemabasa ayo ainoita kumashure hakuna kumbotaurwa, pasina mushandisi kuziviswa nezvazvinoita, zvei, kana ruzivo rwupi mushandisi anotsinhana nemugadziri wake.
Mahwindo haana KUSVIRA chero chinhu; kubva kune yayo interface, kuenda kuhofisi, internet yekutsvagisa uye ayo tabo, sql server, nt, bing, tabo ...
Zvese zvinhu zvave kopi yemafungiro ekare nemapurojekiti epakutanga
Pindura kuna Julio Fernandez
Firefox 74 inosvika neRLBox, kugadzirisa, TLS 1.0 uye 1.1 yakaremara uye nezvimwe
Red Hat Summit 2020 yakanzurwa nekuda kwecoronavirus kutya